Home News Madaxweynaha Jubbaland oo sheegtay in ay wajahayaan xaalad dagaal!!
Madaxweynaha Jubbaland oo sheegtay in ay wajahayaan xaalad dagaal!!
Ugu horayn Madaxweynahu wuxuu salaan sharaf ka qaatay Cutubyo katirsan Ciidamada isaga oo intaas kadib khudbad u jeediyay uu kaga hadlay dhinacyo kala duwan.
Madaxweynaha waxaa uu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay yihiin fulayo shacabka u xoog weyn wuxuu tusaale usoo qaatay Xasuuqii soobe oo uu sheegay in dad aan waxba galabsan ay ku laayeen.
Waxaa uu Madaxweynahu amaanay Ciidamada Saldhiga Baarsanguuni ee Degmada jamaame kuwaas oo uu sheegay in ay yihiin geesiyo shacabkooda u hiiliyay,isagoo sheegay in Ciidamada Jubbaland howlgalka ay sii wadi donaan.
Dhinaca kale Madaxweynahu wuxuu Dowlada kenya uga tacsiyeeyay weerarkii dhawaan dadka aan waxba galabsan Al-shabaab ay la beegsadeen,wuxuu intaas ku daray in Dowlada Kenya waxa shacabkeeda loo beegsanayo ay tahay in laga leexiyo howlgalka ay Soomaaliya ka wadaan iyo gurmadka ay Shacabka Soomaaliyeed u fidiyeen taas oo aan mara hakad ku iman doonin.
Wuxuu ku dheeraday Madaxweynahu in Howlgalada ay bilaabanayaan Ciidamaduna ay guulaysan doonan isagoo Siyaasiyiinta Soomaalida ku booriyay in dagaalka Al-shabaab loo midoobo oo wakhtiga Siyaasda la galinayo lagu bixiyo xoraynta wadanka.